Madheshvani : The voice of Madhesh - ‘कांग्रेस वीपीकै विचार पथमा छ’
‘कांग्रेस वीपीकै विचार पथमा छ’
आनन्द प्रसाद ढुंगाना, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
० नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्व.वीपी कोइरालालाई कसरी सम्झ्नु हुन्छ ?
— म स्व.विपी कोइरालासँग राजनीतिकरुपमा पनि नजिकबाट भेटघाट गर्ने मौका पाएको छु । बडो कठिन परिस्थितिबाट उहाँले कांग्रेसलाई स्थापित गराउन सफल हुनुभएको हो । उहाँसँग हामी पहिलोपटक भेट्दा उहाँको विचारबाट निकै नै प्रभावित भएका थियौं । साँचै नै नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका लागि उहाँको भिजन स्पष्ट थियो । हामी पढ्दै गर्दाखेरि हामी कांग्रेसी हो भनेर भन्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला आफूलाई कांग्रेसी भन्ने व्यक्ति नेपालमा बस्न पाउँदैनथ्यो । त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँले कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँ लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताप्रति एकदम दृढ हुनुहुन्थ्यो । विपी जस्तो राष्ट्रवादी नेता अरु कोही छैनन् । राष्ट्रवादीको ढोङ गर्ने धेरै होलान्, तर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र राष्ट्रप्रति उहाँको जे भिजन थियो त्यो मूल्य र मान्यतालाई कांग्रेसले अँगालेको छ ।
० विपी कोइरालाको नीति र सिद्धान्तलाई कांग्रेसका नेताहरुले आफ्नो व्यवहारमा लागू नगरेको गुनासोहरु छन् नि ?
— विपी कोइरालाको विचार र सिद्धान्तकै आधारमा अहिले नेपाली कांग्रेस छ । नेपाली कांग्रेस यस्तो शक्ति हो जसले हरेक समयमा यो देशका नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । नागरिक अधिकार मात्रै होइन, सामन्तीको विरुद्धमा समाजवादको नारा लिएर अगाडि बढ्यो । जसले गर्दा यो देशका जति पनि कांग्रेसी नेताहरु छन्, त्यसलाई मान्दै आएका छन् । उहाँ वि.सं. २०१६ सालमा दुई तिहाइले प्रथम जननिर्वाचित भएर सरकार चलाउनुभएको थियो । विपी कोइराला गरीब र निमुखा नागरिकका लागि, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने व्यक्तित्वको रुपमा अगाडि देखियो । उहाँले त्यतिबेला छुवाछुतको विरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँले दलितलाई कांग्रेसका महामन्त्री बनाएका थिए । यो देशमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि कांग्रेस संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । हामी सबै नेपालीले उहाँलाई जननायक भन्ने गरेका छन् । किनकि उहाँ जनताका नायकको रुपमा आफूलाई नेतृत्व दिए, जसले कहिल्यै पनि पद र सत्ताको लोभ गर्नुभएन । सत्ता र पदको लोभ गरेको भए उहाँ जेल बस्नुपर्ने थिएन । उहाँले सधैं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि मैले प्रजातन्त्र मात्रै रोजेको भए कांग्रेसले दुःख पाउने थिएन । उहाँले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै लैजान खोजे त्यसले गर्दा नेपाली जनता, राष्ट्र र कांग्रेसले दुःख पाए भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
० कांग्रेसका अहिलेका नेतृत्वले विपी कोइरालाको विचार र सिद्धान्तलाई बिर्सेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?
— विपी कोइरालापछि तीन पुस्ता राजनीतिमा आइसक्यो । जसले स्वाभाविकरुपमा विपी कोइरालाको विचारलाई सुने, त्यसलाई अंगीकार गरे र सँगसँगै हिंडे ती व्यक्तिहरु अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा छन् । अब परिवर्तन हुँदै गएको छ । स्वाभाविकरुपमा विपी कोइरालाको विचार र सिद्धान्तलाई बिर्सियो भनिन्छ तर बिर्सेको छैन । विपीले आफ्नै जीवनमा भनेर जानुभएको थियो कि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि जब सामन्तीहरु हावी हुन खोज्छन्, त्यसपछि फेरि एकपटक कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । विपी कोइरालाको विचार मान्दिँन भन्ने व्यक्ति कांग्रेसभित्र छैन । कांग्रेसभित्र विचारका द्वन्द्वहरु छन् तर ती विचारको द्वन्द्वभित्र पनि विपीको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियताप्रति कहीं पनि मतभिन्नता छैन । कार्यशैलीमा मतभिन्नताहरु होलान् । कार्यशैलीको मतभिन्नतालाई छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टीमा धेरै कुराहरुको छलफल हुन्छन् । हिजो गणतन्त्र नमान्नेहरु थिए, संघीयता नचाहनेहरु पनि थिए । तर कांग्रेस गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा थियो र नेपालमा भयो । जबसम्म कांग्रेसको नेतृत्व भएन तबसम्म कुनै पनि परिवर्तन भएन । चाहे त्यो २००७ सालको परिवर्तन होस्, चाहे २०४६ सालको परिवर्तन होस्, चाहे २०६/६३ सालको परिवर्तन हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नका लागि पनि नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुप¥यो । त्यसले गर्दा नेपाली कांग्रेस सदैव नेपाली जनताको परिवर्तनका निम्ति नेतृत्व गर्ने शक्तिको रुपमा रहिरह्यो । त्यो विचार भनेको विपी कोइरालाको विचार हो । उहाँले नेपाली कांग्रेसभित्र जुन छाप छोडेर जानुभएको छ, त्यहींअनुसार नेता कार्यकर्ताहरुले निर्णय गर्छन् ।
० तर, अहिले नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियतामा ह्रास आउँदै गरेको देखिन्छ । कांग्रेसले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको विश्लेषण गरिँदैछ । यसलाई स्वीकार्नु हुन्छ ?
— नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता ह्रास भएको छैन । कांग्रेसले गरेको परिवर्तनको बारेमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले जनतासम्म पु¥याउन सकेका छैनन् । यदि ह्रास आएको भए विभिन्न समयमा भएका चुनावको मत परिणाम हेर्नुस् । कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेसको लोकप्रिय मतमा कमी भएको छैन । गत निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने जुन कम्युनिष्ट गठबन्धनले प्रत्यक्षमा त्यस्तो सिट जितेको छ तर कांग्रेसको समानुपातिक मत कम भएको छैन । भनेपछि नेपाली कांग्रेस जनतामा अलोकप्रिय भएको छैन । कांग्रेसको विरुद्धमा सबै शक्तिहरु लागेका छन् । कांग्रेसलाई कमजोर पा¥यो भने मात्रै शासन गर्न सकिन्छ भन्ने राणादेखि लिएर अहिलेसम्मका शक्तिहरु कांग्रेसको विरुद्धमा लागेका छन् । अहिले जुन किसिमको षड्यन्त्र हुँदैछ त्यो पनि कांग्रेसलाई नै कमजोर गर्न खोज्दैछ । जुन शक्तिको अधिकार २००७ सालमा खोसियो, २०४६ मा खोसियो ती शक्तिहरु अहिले पनि कांग्रेसलाई कमजोर पार्न खोज्दैछन् । त्यसका लागि विभिन्न प्लेटफर्महरु खोलिँदैछ, जसले कांग्रेसलाई कमजोर गर्न खोज्दैछ । त्यसको बाबजुद पनि कांग्रेसलाई कमजोर गर्न सकेको छैन । करिब–करिब दुई तिहाइको बहुमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन । जनताले अहिले पनि चाहिरहेका छन् कि कांग्रेसले नै केही गरोस्, कांग्रेसले नै यो देशलाई बचाउन सक्छ भन्ने आवाजहरु उठिहरेका छन् । जनता अहिले पछुताइरहेका छन्, कम्युनिष्ट र मधेशकेन्द्रित दललाई मत दिएर ।
० नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको तयारी हुँदैछ, महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि बनाइसकेको छ । कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
— कांग्रेसले आफ्नो १४औं महाधिवेशनका लागि पहिला पनि कार्यतालिका बनाएको थियो । यो कोभिड–१९ नभएको भए धेरै काम सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो । कोभिड–१९ का कारण गाउँ–गाउँमा पुग्न सकेनौं, हामीले जुम बैठक गर्नुप¥यो, टेलिफोनमार्फत कार्यकर्ता साथीहरुसँग सम्पर्क गर्नुप¥यो । तर हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं कि जुन हाम्रो कार्यतालिका छ, त्योअनुसार महाधिवेशन गराउने हामीले अठोट लिएका छौं । त्यसबाट हामी पछाडि हट्दैनौं । हाम्रो सभापतिले पनि प्रष्टरुपमा भनिसक्नुभएको छ कि कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनका लागि आन्तरिक विवादहरुलाई समाधान गर्दै नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नेछौं ।
० कांग्रेसमा अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाउँला त ?
— पुस्ता भनेको विपी कोइराला, गणेशमान सिंह, किशुनजी, गिरिजाबाबु, सुवर्णजी जस्ता व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । अहिले २००७ सालपछिका पुस्ताले नै नेतृत्व गर्दैछ । नेपाल विद्यार्थी संघका नेता यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । भनेपछि त दोस्रो पुस्ता आइगो । अब तेस्रो पुस्ता पनि आउँछ, आउँदैन भन्ने कुरा होइन । जसले विपी कोइरालाको नाउँ सुन्यो, जसले विपी कोइरालाको विचार पढ्यो, जो विपी कोइरालाको विचारबाट प्रतिपादित भएर संघर्ष लागे, जसले विपी कोइरालाको विचार सिद्धान्तलाई अँगालेर हिंडे त्यो शक्ति आउँदैन भन्ने कुरा होइन । सबैले हेरिरहेका छन्, नयाँ शक्तिको रुपमा कांग्रेसका महामन्त्री भएर आउँदैछन् । नयाँ शक्तिहरु केन्द्रीय समिति भएर आउँदैछन् । कुनै पनि कुराको शक्ति हस्तान्तरण प्रक्रियागत रुपमा नै हुन्छ । प्रक्रियागतरुपमा भयो भने त्यसले दिगो समयसम्म चल्छ, तर आकस्मिकरुपमा भयो भने त्यसले दिगो कालसम्म नचल्न पनि सक्छ । त्यसले गर्दा निश्चय नै प्रक्रियागत रुपमा कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताहरुले नेतृत्व गर्छन् । नयाँ पुस्ता र युवाहरुले जोश र जाँगरका साथ नयाँ कुराहरु राखिरहेका छन् । त्यसलाई नेपाली जनताले पनि अस्वीकार गरेको छैन ।